Ukukhwabanisa kwekhuphoni le-Starbucks: Kungani ungafaki ibhakhodi? | Martech Zone
Ukukhwabanisa kwekhuphoni le-Starbucks: Kungani ungafaki ibhakhodi?
KaSeth blog unombhalo omayelana nesigqebhezana esingaphathwa kahle esise-Starbucks. Ngokunikezwa usayizi we-Starbuck, angiqondi ukuthi kungani bengafakanga isu lesigqebhezana nge-barcoding. Lobu ubuchwepheshe obulula futhi obubizi… budinga kuphela ukuqinisekiswa kukhompyutha ye-Point of Service.
Ungakwenza kanjani lokhu? Abathengisi abaningi be-software yokukhangisa nge-imeyili bavumela izintambo ze-Substitution (uma kungenjalo, dlulela ku- I-ExactTarget). Lokho kusho ukuthi ungadlula kalula intambo endleleni yesithombe. Intambo eyedlule ngesikhathi kuvulwa i-imeyili empeleni yakha ibhakhodi ngamandla, ngakho-ke i-Starbucks ingabhala kalula uhlobo oluthile lwekhodi yekhuphoni - ehlukile kobhalisile - bese iyikhipha njengebhakhodi.
Lapho isetshenzisiwe, ophethe imali angathwebula i-imeyili enebhakhodi ekuyo. Inani libhekwa phezulu ngaphakathi kohlelo bese lihlolwe ubuqiniso nokuhlengwa. Ngaphezu kwalokho, ukuhlengwa kwesigqebhezana kungabhaliswa kubuyele ekhelini le-imeyili langempela - ukuhlinzeka uMarketer ngolwazi oluthile olubalulekile lokuthi ngubani osebenzise isigqebhezana, kwathatha isikhathi esingakanani, walisebenzisa kuphi, njll. Lena idatha enamandla! Impela imininingwane ezoba ngumthombo omkhulu phansi komgwaqo!
Ngokukhishwa kubuchwepheshe beshelufu nokuhlela okulula, i-Starbucks ibingazisindisa ihlazo.
AmaBlog & Blossoms: Imbewu, Ukhula, Impova Nokukhula
Aug 31, 2006 ngo-8: 55 PM
Umbono wakho muhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi yini eyayenziwa ngabafana be-IT beStarbuck?